အမျိုးသားများအတွက်စိတ်မပါ ၀ င်စားမှုဆိုင်ရာလိင်စွဲလမ်းမှုနှင့် paraphilias များကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း (၁၉၉၂) - Your Brain On Porn
အမျိုးသားများတွင် nonparaphilic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစှဲနှင့် paraphilias ၏တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု (1992)
J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1992 Oct;53(10):345-50.
Kafka အမတ်1, Prentky R ကို.
nonparaphilic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ (NPSA) ၏တစ်ဦးနှင့်အဓိပ္ပါယ်ပူဇော်သောနှင့် NPSA နှင့် paraphilias (pas) တို့အကြား comorbidity အကြံပြုစာပေပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ကျနော်တို့ NPSA နဲ့ PA အကြားဆက်ဆံရေးရှင်းလင်းဖို့လေ့လာမှုကိုဖော်ပြရန်။
ကြော်ငြာတွင်အမျိုးသားသုံးဆယ်ဆက်တိုက်ဖြေဆိုမှုများ (PA: N = 15; NPSA: N = 15) ကိုအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြိမ်ရေ၊ စုစုပေါင်းလိင်မှုကိစ္စထွက်မှု၊ လိင်ဆန္ဒပြင်းထန်မှု၊ သမားရိုးကျမဟုတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများတွင်အချိန်ဖြုန်းခြင်းနှင့်စုစုပေါင်းလိင်စိတ်ဆိုင်ရာအချိုးအစားတို့ကိုတိုင်းတာသည်။ အုပ်စုကွဲလွဲမှုများကိုစာရင်းအင်းများအရ Fisher ၏ဖြစ်နိုင်ခြေစမ်းသပ်မှု (တပင်တည်း) ကို အသုံးပြု၍ လေ့လာခဲ့သည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေး၊ အလုပ်၊ ဘဏ္financialာရေး၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲများကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။
အုပ်စုနှစ်ခုလုံးတွင်တစ်သက်တာလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများမှာ NPSAs ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်တွန်းအားပေးမှု၊ အုပ်စုနှစ်ခုလုံးတွင်စုစုပေါင်းလိင်မှုကိစ္စသည်အကြမ်းအားဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသော“ ပုံမှန်” အမျိုးသားနမူနာထက်သုံးဆပိုများသည်။ စုစုပေါင်းလိင်ထွက်ပေါက်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုပုံမှန်မဟုတ်သောဖြန့်ဖြူးခြင်းပုံစံတွင်ဖော်ပြထားသည်။ NPSA / PA ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများသည်သမားရိုးကျလိင်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကိုတိုင်းတာမှုများအားလုံးတွင်ကျော်ဖြတ်ခဲ့သည်။ ဤအပြုအမူများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြိမ်ရေ၊ ပြင်းထန်မှုနှင့်အချိန်ကိုတိုင်းတာရာတွင်အုပ်စုလိုက်ကွဲပြားမှုများသည်စာရင်းအင်းအရထူးခြားမှုမရှိပါ။
နှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ sequelae ဖြင့်လိုက်ပါသွားသည့် paraphilic ယောက်ျား၏ 93% အတွက်မျိုးစုံ NPSAs ၏ cormorbid ရှိနေခြင်း NPSAs လည်း pas အဖြစ်ထင်ရှားနိုင် psychopathology တစ်ဦးယဉ်ကျေးမှုအဆင်ပြေအောင်ပုံစံကိုကိုယ်စားပြုစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ hypersexual အလိုဆန္ဒ၏အဓိပ်ပါယျကိုကမ်းလှမ်းနေသည်နှင့် hypersexual အလိုဆန္ဒနှင့်သမားရိုးကျမဟုတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထွက်ပေါက်များအကြားဆက်ဆံရေးအကြံပြုသည်။